Indlela yokubuyisela iimvakalelo kumntu othandekayo
Uthando aluhlali ngonaphakade. Emva konyaka, emithathu, iminyaka eyisibhozo, sifumana ukuba iimvakalelo ziye zanciphisa, umnqweno uphelile, kwaye ubomi obudibeneyo buye buba nobomi bemihla ngemihla kwaye buyeke ukukholisa iimvakalelo ezintsha. Indlela yokubuyisela iimvakalelo kumntu esimthandayo esake senza isigqibo sokubopha ikusasa lethu? Ingaba oku kusemgangathweni? "Mhlawumbi!" Iingcali zengqondo ziqinisekile. Ukongezelela, nganye imivalo entsha yeemvakalelo iyanzulu kwaye ihle ngakumbi kunaphambili.
Amaxesha okutshatyalaliswa akayi kudlula enye ibini. Sicinga: mhlawumbi, ngubani ongasemva kwethu, nje umntu osengozini? Siziva sidaniwe kwaye singenanto engathandabuzekiyo, izenzo zendoda yakhe ziyacaphukisa, kwaye iimpawu zakhe zibonakala zingenangqondo. Imiva enjalo ngokukhawuleza okanye kamva ibonakale kwibini nganye, kwaye ayivukanga enye, kungeyizihlandlo ezimbini zokuphila ngokubambisana. Kwaye, ngelishwa, kwaye mhlawumbi, kwaye ngenhlanhla, ukwahlukana kule meko akuyi kunceda. Kufuneka uqonde kwaye wamukele into yokuba udangatheko luya kudlula. Yimvelo yendalo kunye neyesiqhelo sokuphuhliswa.
Imfesane kunye nokungathandeki, uthando nokucaphukisa ukuzalisa nayiphi na ubudlelwane - intsapho, ubuhlobo, abasebenzi. Iingcali zengqondo zibonisa ukuba lo ngumthetho wendalo. Uthando ngumzimba ophilayo, owenza imihla ngemihla, uzaliswe yimikhosi emitsha, iyawa. Kodwa yonke into esilandelayo uthando lomlingani osisigxina usenza sibe nemizwa enamandla ngakumbi. Ndikholelwe, ngelinye ilanga uya kufumana ngokukhawuleza ukuba ulungile kwaye ucolile nomlingane wakho. Yaye ungowawe-indawo yonke, eyona nto ibhetele, esondeleyo kunye nomntu othandekayo. Kodwa ukuqonda iipatheni zobudlelwane akuthethi ukubeka izandla. Kutheni ulinde umtshato wakho uphinde wakhiwe ngokwakho, ukuba unokuthatha yonke into ezandleni zakho? Thatha ingxaki, kuba ngokubuyisela iimvakalelo kumntu obathandayo, unokomeleza intsapho. Kholelwa kuwe kunye neqabane lakho - thatha isinyathelo sokuqala.
Into yokuqala yokuyenza kukuba uhlaziye into engafanelekanga kuyo kwintsapho. Cinga, yintoni na ekuncinci? Mhlawumbi ukhathele ukutya kwesidlo ngexesha elifanayo imihla ngemihla ngeepatata ezingenakwenzeka njenge-dish dish, ulala ngesondo enye okanye ukuvalelwa ekuhambeni kwentsimbi isalathiso somyeni wakhe "Weld ikhofi, umntwana"? Emva kwexesha, siqokelela uluhlu olupheleleyo lwezithethe ezincinane, esizenzayo kumatshini. Ngokuqhelekileyo kukuthintela ukuba ungaboni ngendlela entsha ubomi bakho kunye nomlingane wakho. Ukuba ingxaki ihlala kule nkcukacha ezincinci, xelela malunga neqabane lakho kwaye uguqule kunye. Yenza imvume, yidla kwi-cafe, utshintshe iTV ngebhodi yebhodi. Ngelizwi, gxotha imikhuba ekhusela ukuba ungaboni iimvakalelo zakho.
Ngokuqhelekileyo sikhalaza ukuba "kukhona into ekhoyo" kuthi, kodwa sivila ukuhlala phantsi size siqonde ukuba yintoni. Zive ukhululekile ukuvuma ngokunyanisekileyo kumyeni wakho ukuba uphoswa imihla yokuthandana phantsi kwenyanga, ukubambezela kwangaphambi kokulala kunye nezipho ezincinci kodwa ezibiza kakhulu entliziyweni. Emva koko, kwizinto ezincinci ezisijikelezile kwimpilo yemihla ngemihla, iimvakalelo zethu ngomntu othandekayo zixhomekeka kakhulu.
Ngendlela, ekupheleleni kwemvakalelo, imikhwa ayisoloko ibeka ityala. Mhlawumbi awunayo intsha eyaneleyo? Ngokomzekelo, ndandixhalabele ngesondo, nto leyo yaba yintlanzi. Ndacinga ukuba kukuphela kwaye umnqweno awukwazi ukubuyela. Ndagqiba kwelokuba ndiza kwenza enye inzame yokubuyisela ubushushu obudlulileyo, kwaye ukuba andizange ngiphumelele, kuba lixesha lokungena. Kwaye ndamemela umyeni wam ukuba "aqhube" ekamelweni lehotele ... Sasikhe senze oku ngaphambili. Andiyi kudibanisa, olunye uhambo oluya ehotele aluzange lushintshe umtshato wethu ube yinto yamagama. Kodwa yasebenza njengomgudu wokulungisa iimpazamo eziqokelelwe esizifunayo kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba uneminyaka engakanani uhlala kunye kunye, qiniseka ukuba uqhubeke nokufunda izinto ezintsha-izitsha ezintsha, iingxaki, imidlalo kunye nokuzonwabisa. Ekugqibeleni, utshintshe iinwele zakho uthenge ifenitshala entsha. Isiqhelo esiqhelekileyo senveli sinceda kakhulu ukugcina iimvakalelo ezibukhali kwaye zingadangali. Futhi ungalokothi unqume kwizinto eziye zaphunyezwa. Emva kwakho konke, ubomi bakho buqhubeka, kwaye kukho izinto ezininzi ezithandekayo!
Ngamanye amaxesha, siyahamba sisuka komnye, kuba asinanto nantoni na ngaphandle kwekhaya. Sinezifundo ezahlukeneyo, izinto zokuzilibazisa kunye nabahlobo namadoda am. Ukuba awukwazi ukufumana iimfuno ezifanayo, kufuneka udale. Ubuncinane ke oko i-psychologists icebisa. Unokujoyina abantu ababini kwi-studio yomdaniso okanye echibini lokubhukuda, bathenge ikhamera kwaye kunye kunye nokufunda ukuthatha imifanekiso yezakhono, ukufunda iincwadi ezifanayo kwaye uxoxe ngokuphuhliswa kwesalathisi kunye nesimo sombhali. Akunandaba nokuba yiyiphi umsebenzi owukhethayo, ukuba uyakukhathalela kuphela. Ekugqibeleni, xa sele usenzekile.
Ukuba uzimisele, zama ukudala ingxaki efanayo okanye ubeke umgomo ongekho. Akukho sizathu sokuba bathetha ukuba iingxaki ezidibeneyo zidibanisa. Oku kunokuba, umzekelo, uhambo oluya eThailand. Bhala phantsi okuza kuyenza ukwenzela ukufeza le njongo. Umzekelo, ukulawula ukufumana imali eninzi, fumana ipasipoti, fumana i-visa kwi-ambassy, ​​uthenge iisuti zokuhlamba kunye nekhamera yevidiyo, ukuqokelela i-suitcase uze wenze uluhlu lwezinto ezifunwayo. Ngokubambisana, vumelana ngokulandelelana kwamanyathelo kwaye unqume uxanduva lwamaqela. Uza kubona: ekufikelele ekupheleni kwaye unqobe yonke imingcipheko, awuyi kuphinda uhlale usondele kunye nomntu oyintanda, kodwa uya kuba nekratshi kwiqela lakho! Ukuziva ukubuyela kumthande wakho, uya kuphinda uphinde uphakamise amaphiko kwaye uya kukwazi ukuzonwabisa ubomi ngokuzeleyo.
Enyanisweni, kulula ukwamkela nokwamkela into yokuba umyeni wakho akasayi kuvelisa iimvakalelo kunye neemvakalelo ezifanayo ngexesha lokulala. Kakade! Ngoku unesizathu esibalulekileyo sokubandezeleka. Uthando olulahlekileyo lunokukhunjulwa ngawo onke amathuba, ukuhlakulela isisa. Nangona kunjalo, oku akuyakhayo kwaye inonakalisa. Okokuqala, kufuneka uqaphele ukuba inkanuko yomlilo ayikwazi ukuhlala ngonaphakade. Kwaye kulungile! Ubomi bam bonke andinakulala kwaye ndingadli ngenxa yothando. Njengoko kubhalwa, kodwa ubukhulu bezinto ezithathayo buya kutshintshwa yimvakalelo enokulinganayo kunye neyofana. Ukongezelela, zama ukuphendula ngokwakho kumbuzo owodwa: unokucinga ubungqina bakho ubomi ngaphandle komyeni wakho? Ewe! Enyanisweni ukukhalaza kwiintombi-abahlobo-omnye, kwaye kubonakala sengathi ulunyaneni yinto enye. Kwaye kuba ukuba impendulo yakho "Hayi" - ke iimvakalelo zisaphila. Zama ukukhumbula oko kanye lakho iqabane lakho lakuthandayo ukususela ekuqaleni. Ngaba utshintshile kangaka? Ngaba akukho nto yashiywe yile mntu? Zama ukukhumbula iimvakalelo zakho. Yibhale ngokucacileyo ngokomzwelo uze uzame ukubheka umyeni ngabo abo bathandekayo - ngamehlo.
Ngaba kukho uthando olungunaphakade?
Uthando lubala okanye into?
I-Sauce evela kwi-sorrel
Imidlalo yokudlala indima: idibanisa impilo yakho yesondo!
Iingubo zeMfashini, iAntumn-Winter 2015-2016 (ifoto): ezigqoka ziza kuba zihamba phambili kwi-2016?
Isicaccia saseNtaliyane isonka
Imifanekiso yabasetyhini ababulalayo
I-Easter i-wreath ngokuzaliswa
Yintoni enokuyinikela ngokuzalwa komntwana?